Gịnị Bụ Ebu Ala?
Gịnị bụ ebu ebu? Ebu ebu zuru oke maka imeputa ihe ndi puru iche site na ịpị ma ọ bụ iweghachi. Na mgbakwunye, a na-akpọkwa nkwado nke ebu ihe ebu ebu. Dịka ọmụmaatụ, igwe nkedo na-anwụ anwụ na-ejikọ ma na-edozi akụkụ dị iche iche nke ebu dịka otu r ...
(1) Ebube ogwu na-ebu otu uzo Mgbe ebuchara meghere, ihe na-ebughari ya na ihe edozi a na - ekewapu, nke mere na eweputara akụkụ plastik, nke a na - akpọ otu okpukpu okpukpu okpukpu a na - akpokwa okpukpu abuo abuo. . Ọ bụ ụdị ngwugwu ọgwụ kachasị mfe. Ọ c ...
Plastic Ọgwụ na ịkpụzi shrinkage
Plastic ọgwụ ịkpụzi shrinkage bụ otu n'ime Njirimara mgbe ihe onwunwe okpomọkụ drips. Onu ogugu nke nkedo ogwu di nkpa ichoputa ihe nchoputa nke ikpeazu. Uru ahụ na-egosi ọnụọgụ nkwekọrịta nke ihe nrụpụta gosipụtara mgbe ewepụrụ ya na ...